WARBIXIN: Waa Kuwee SIDDEEDA Ciyaartoy Ee Liverpool Ka Tirsan Ee Booskooda Joogtada Ahi U Xaqiijisan Yahay Xilli Ciyaareedka Dambe Yaase Boosaska Kale Ku Dagaalami Doona? - Gool24.Net
WARBIXIN: Waa Kuwee SIDDEEDA Ciyaartoy Ee Liverpool Ka Tirsan Ee Booskooda Joogtada Ahi U Xaqiijisan Yahay Xilli Ciyaareedka Dambe Yaase Boosaska Kale Ku Dagaalami Doona?
June 8, 2019 Apdihakem Omer Adem
Liverpool ayaa xili ciyaareedka soo socota ku bilaaban doonta iyadoo niyad samaan intii hore ka badan qabta, Waxa ay tartan u geli doonaan horyaalka oo ay hal dhibic u seegeen xilli ciyaareedkan halka ay sidoo kale ku raaxaysan doonaan difaacashada Champions League.
Tababare Jurgen Klopp ayaa horeba u xaqiijiyay inuusan xagaagan lacago badan suuqa ku bixin doonin balse uu in badan horumarin doono waxa uu ku haysto Anfield.
Reds ayaa ugu horreynba ka shaqayn doona buuxinta boosaska ay baneeyeen Alberto Moreno iyo Daniel Sturridge oo kooxda laga fasaxay.
Haddaba, Waxaanu halkan idiinku soo bandhigi doonaa siddeed xiddig oo booskooda joogtada ah ee xilli ciyaareedka dambe uu meel u saaran yahay iyo xiddigaha kale ee saddex boos ku tartami doona.
SIDOO KALE AKHRISO: "Mohamed Salah Wuu Ka Tagi Doonaa Liverpool 12ka Bilood Ee Soo Socda"
Ugu horreyn, Alisson Becker oo ah goolhayaha kooxda ayaa ah mid aan wax shaki ahni saarnayn inuu goolhayaha dookha koowaad sii ahaan doono.
Alisson ayaa xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee kooxda soo buuxiyay dhammaan gal-daloolooyinkii booskaas ee dhibaatada weyni kasoo taagnayd isagoo sidoo kale kusoo guuleystay gacantii dahabka ahayd ee horyaalka.
Iyadoo daafaca Reds uu xilli ciyaareedkii dhawaa soo ahaa midka ugu wanaagsan ayay saddex xiddig oo kamid ahi yihiin kuwo booskooda huba iyadoo hal boos tartan loo geli doono.
Alexander Arnold, Virgil Van Dijk iyo Andrew Robertson ayaa dhammaantood qayb kasii ahaan doona shaxda Klopp halka booska soo hadhay ee daafaca dhexe ay ku tartami doonaan xiddigo ay ugu horreeyaan Joel Matip, Dejan Lovern iyo Joe Gomez.
Khadka dhexe ayay labada xiddig ee booskooda aan werwerka badan ka qabin ay yihiin Jordan Henderson iyo Fabinho taas ayaa la micno ah in booska soo hadha ay ku tartami doonaan James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Georginio Wijnaldum iyo Naby Keita iyo waliba haddii saxeexyo cusubi soo kordhaan.
Saddexleyda weeraar ee Liverpool oo ah mid amaan aan kala joogsi lahayn helaysay dhawaanahan ayaa hal boos shaki yari ku jiri doonaa waana booska Roberto Firmino ee weerarka dhexe halak Mohamed Salah iyo Sadio Mane ay labada garab sii haysan doonaan.
Firmino oo haysta kalsoonida Jurgen Klopp ayaa tartan kala kulmi doona Divock Origi oo geesi aan loo heesin soo ahaa xilli ciyaareedkan sidoo kale haddii weeraryahan cusubi soo kordho ayuu xifaaltanku sii adkaan doonaa.